ပေတောခေတ်မီဥစားကြက်ခြံစီမံကိန်း သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနား – AYA Bank
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၃၀ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့နံနက် ဝ၉းဝ၀ နာရီအချိန်တွင်နေပြည်တော်ရှိ M Gallery by Sofitel တွင် ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်မှ အတိုးနှုန်းသက်သာသော နှစ်ရှည်ချေးငွေနှင့် ပံ့ပိုးကူညီ အကောင်ထည်ဖော်ပေးထားသော ပေတောကျေးရွာ ဥစားကြက်ခြံ စီမံကိန်းအားပေတောကျေးရွာရန်ပုံငွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း၊ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်နှင့် Myanmar C.P.Livestock Co.Ltd.တို့အကြား သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအခမ်းအနားအားကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသောင်းထွန်း၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးအောင်နိုင်ဦးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန မှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းဝင်း၊ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်မှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဦးမြင့်ဇော်နှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ Myanmar C.P. Livestock မှPresident Mr.Wirat Wongpornpakdeeနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ပေတောကျေးရွာရန်ပုံငွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ဆန်းဦးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ကြပါသည်။
ရှေးဦးစွာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၊ Myanmar C.P. Livestock Co. Ltd. နှင့် ပေတောကျေးရွာရန်ပုံငွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းမှတာဝန်ရှိသူအသီးသီးတို့မှယခုစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အကြောင်းအရာနှင့်ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးရလာဒ်များအား ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း အစီအစဉ်အား ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်အဖွဲ့ လိုက်စုပေါင်း မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကာအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပါသည်။
← ပေတောခေတ်မီဥစားကြက်ခြံစီမံကိန်း သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနား
သံဃမဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများ၊ ဓမ္မာစရိယနှင့် ပါဠိပထမပြန် စာမေးပွဲ မေးခွန်းထုတ် / စာစစ် သံဃာတော်များအား နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်း →